Otu esi eto / ịrụzi ntutu？
Igwe kpọrọ nkụ na ajị agba, mgbe ihu igwe kpọrọ nkụ, ị nwere ike ịnụ ụda oge niile "papapa", jọrọ njọ, adịghị mma na enweghị obi ụtọ.
Ntutu dị nro ga-eme gị obi ụtọ, n'otu oge ahụ, a ga-enwekwu mmụọ iji kporie oge.
Agbanyeghị, i jirila otutu igwe na edozi isi, mana nsonaazụ a ka na-atụghị anya ya. Thought cheela echiche ịnwale ụzọ nlekọta ntutu ọhụrụ?
Nlekọta ntutu isi BLACK TECH
DOZRAN - Mmanụ mmanu Mkpa Nri
Nlekọta ntutu isi na ọtụtụ mmanụ dị oke ọnụ ahịa
Nlekọta ntutu edozi isi nke a ga-eme n'ụlọ enweghị ike karịa “ngwungwu nri” nke ụlọ ahịa na-akpụ isi, nke ka adaba adaba ma gbasie ike.
Youmara na mgbakwunye na akụkụ, nlekọta anụ ahụ, na mmụcha, a na-ejikwa mmanụ dị mkpa maka nlekọta ntutu, nke na-azụlite ntutu na ntutu isi na mkpokọta, nke mere na ntutu dị mma ma maa mma, na-eme ka ntutu ahụ dị elu, ma na-ewusi ntutu ike. ntutu gbasaa.
Ndị na-agwọ Aro na-amasị ya mgbe niile ma dị mma iji dozie nsogbu na mmanụ ndị dị mkpa, n'ihi na ha na-ahọrọ ihe ndị dị mma, nke dị mma ma mara mma. Banyere ntutu, ha kwuru: N'ezie, enwere ike idozi ya na mmanu di nkpa!
Nsogbu nri na-edozi ahụ bụ isi nsogbu nke ntutu akọrọ
Ntutu ntutu dị mfe na-apịaji, nke pụtara na ndụ ntutu dị egwu, na ọtụtụ ihe kpatara ya bụ n'ihi na ezughi oke nri, na - ebute mmiri, protein na ihe dị iche iche na - akpata, nke a na - eme ka ntutu ntutu dị mma ma mebie ntutu isi.
Nlekọta na-ekwesịghị ekwesị o bukwara otu n’ime ihe na - akpata ajị ajị. Washingsa ahụ ugboro ugboro na ugboro ugboro perm dyeing nwekwara ike ibute mmebi ntutu, na-eme ka ntutu gwụ ntutu ma kpọọ nkụ.
Oké nrụgide ọrụ, karịsịa maka ndị ahụ ndị ji kọmputa ogologo oge, tinye uche gị elu. Ka oge na-aga, ụbụrụ ga na-atọ gị ụtọ mgbe niile.
N'ihi ya, a na-emetụta usoro endocrine nke tolitere na ntutu, na-eduga n'ịzu oke ọgbụgba sebaceous, na-egbochi ntutu isi, yana na-eme ka ntutu gị kpọọ nkụ.
DOZRAN - Mmanụ mmanu Mkpa Nri, agwakọta na mmanụ dị iche iche dị mkpa dị mkpa, ọ nwere ike zụlite ntutu na ntutu isi ma nyere aka mee ka ntutu dịghachi, na -eme ka oke, jupụta na isi ike.
Ihe ndị dị mkpa mmanụ iji mejuputa ihe nri dị mkpa maka ntutu
Ufodu ihe di n’ime ihe eji eme onodu di nfe di mfe isi n’iru ya, mee ka isi ntutu di n’ime. na-eme ka abụba na ntutu ghara ịdị.
Ọtụtụ ihe ntụ oyi anaghị atọ ụtọ acidic, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ha ga-akpọtụrụ isi ala mgbe a na-eji ya, nke ga-emebi mmebi ogologo oge.
DOZRAN - Mmanụ dị mkpa nri, enyeghi mmanụ silicone, isi ya na ihe ndi ozo. Ọ dabere na mmanụ dị oké ọnụ ahịa sitere n'okike ma tinye ya na ntutu. Ọ nwere ike mepụta akwa nchekwa nke mmanụ dị mkpa, ebe ị na-atụgharịkwa ihe oriri nke ntutu isi, ọ na-eweghachi ntutu mebiri emebi.
Molemụ irighiri mmanụ na - eme ka mmanụ dị mma nwekwara ike ịkwalite nrugharị nke ahụ mmadụ, mee ka obi dajụọ ahụ ma nwekwa ahụike na uche.
Kedu ihe bụ ihe nzuzo DOZRAN - Mmanụ Mkpa Mkpa Mkpa?
// na Ntụziaka //
E jiri ya tụnyere kemịkal dị na klọọkụsị ọdịnala, ndị na - ahụ maka ọgwụgwọ na - ahọrọkarị iji mmanụ dị mma na eke dị mkpa iji mezuo ebumnuche ntutu. Nhọrọ nke usoro mmanụ dị mkpa bụ ihe kacha mkpa.
Iji nweta nsonaazụ achọrọ n’uche, ndị otu nke ndị na-agwọ ọrịa isi na-anwale ma mezie usoro ahụ, ma emesịa kpebie iji mmanụ mkpụrụ vaịn na mmanụ aki oyibo ka mmanụ dị mkpa. Na mmanụ ginger, mmanụ akwukwo ahihia, mmanụ ylang-ylang dị ka mmanụ mmetụta. Iji mesoo nkụ ntutu, frizz, mfe ịda na nsogbu ndị ọzọ, mee ọgwụgwọ ezubere iche.
Mmanụ mkpụrụ vaịn na mmanụ aki oyibo nwere ike inye ntutu ahụ ihe ndị dị mkpa maka ntutu isi, na mmanụ rosemary akwukwo nwere ike ịkpụ ntutu ma mee ka ntutu dị nro ma dịkwa mma.
Ginger mgbọrọgwụ mmanụ nwere ike idozi ntutu akọrọ na nkewa, na Ylang Ylang mmanụ nwere ike ime ka ntutu gbaa ọchịchịrị ma maa mma.
Mkpa mmanụ nwekwara ike gwọ ahụ na uche mgbe a na-echebe ntutu. Molemụ irighiri ihe na-adịghị mma nwere ike ịbanye n’ahụ mmadụ site n'echiche nke isi na anụahụ, nke na-eme ka ike gwụ gị ma mee ka obi daa jụụ. Na-azụ ahụ, site n'èzí ruo n'ime.
Ọ bụrụ n ’ịnọgidesi ike n’iji ya mee ihe oge ụfọdụ, akpacha ajị ajị, ihe ga-esi gbawaa, na frizz kpatara perming na agbaze enwere ike ịrụzi ya ruo n’ókè ụfọdụ.
Ogologo oge iji mee ka ntutu dị ike, dị nro ma na-egbu maramara, ma nwee ọ aroụ.
Ahụmahụ ọhụrụ na-ahụ maka ntutu isi, dị njikere ịnwale ya?